ယူကေ၏ဘီဘီစီနှင့်ကနေဒါမှကမ္ဘာ့သတင်းသတင်းများ Election Graphics အတွက် In-Studio Camera ကိုခြေရာခံရန် Mo-Sys မှ StarTracker ကိုရွေးချယ်ပါ။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဗြိတိန်ရဲ့ BBC နှင့်ရွေးကောက်ပွဲဂရစ်ဖစ်ဘို့ In-Studio ကကင်မရာခြေရာကောက်များအတွက် Mo-sys ကနေကနေဒါ၏ Global သတင်းကို Select လုပ်ပါ StarTracker
လန်ဒန်, အင်္ဂလန် - မယ့်သူ့ရဲ့တတိယ NAB အသွင်အပြင်အောင်ပြီးနောက်, StarTrackerပထမအလိုအလျှောက်, Real-time optical ကင်မရာခြေရာခံခြင်းစနစ်, ကင်မရာရွေ့လျားမှုခြေရာခံခြင်း၏ dynamic ကမ္ဘာကြီးအတွက်နည်းပညာစံဆောင်လုလင်ဖြစ်လာသည်။ လန်ဒန်အခြေစိုက်အခြေပြုကတီထွင် mo-sys အင်ဂျင်နီယာ, ကို virtual set ကိုပေး 80 ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့ရဲ့ NAB ပြခန်းအတွက် StarTracker ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Mo-sys NAB တဲအပြင်, ကုမ္ပဏီရဲ့နည်းပညာကိုမှာခင်းကျင်းပြသခဲ့တဲ့: Blackmagic ဒီဇိုင်း/ Ultimatte, ChyronHego, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ, WASP3D, သုည Density နဲ့ Ross ကဗီဒီယို.
အခုဆိုရင်ကမ္ဘာ့အများဆုံးဂုဏ်သတင်းထုတ်လွှင့်သူတို့၏အမြင့်ဆုံးသော-ပရိုဖိုင်းကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအတွက် StarTracker အပေါ်အားကိုး။ ဘီဘီစီထပ်တလဲလဲနှင့် တွဲဖက်. , StarTracker မရွေး Vizrt ထိုကဲ့သို့သောဗြိတိန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံအတွက်အသုံးပြုရန်ဂရပ်ဖစ်။ ကမ္တာ့သတင်း, ကို virtual အစုံနည်းပညာကနေဒါရဲ့အကြီးဆုံးသတင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းခေါင်းဆောင်ရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ StarTracker ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့က virtual reality တွေအများကြီးကိုသုံးပါ," Gerry Belec, ဒါရိုက်တာ, စစ်ဆင်ရေးနှင့်နည်းပညာ, ဂလိုဘယ်သတင်း, Corus Entertainment ကဆိုပါတယ် "ဒါပေမဲ့ဒီတစ် Mo-sys စနစ်အား အသုံးပြု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုညဥ့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ High-end ကင်မရာများနှင့် jib သုံးထားပြီးခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောမဟုတ်ဘဲခေတ်မမီတော့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဟောင်းပစ္စည်းကိရိယာများအသက်တာသစ်ကိုပေးတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ဆိုကင်မရာသို့စအစုံကို virtual သို့မဟုတ်တိုးပွားဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုသိခဲ့ရတယ်။ ဤသည်ကိရိယာများဒါအထူးပြုဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ကအကြီးအစျေးနှုန်းအဘို့အမွေဂီယာနှင့်အတူယာယီကို virtual set ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ မျက်နှာကျက်ပေါ်စတစ်ကာများချပြီးအားဖြင့်ခြေရာခံများနှင့်မည်သည့်နေရာအရပ်ကို virtual ဖြစ်၏။ "
Belec သူတို့နေ့ရက်ကာလကိုများစွာမယ့်စုံတွဲတစ်တွဲမေလ9ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီပေးပို့ ယူ. , သူတို့တက် လာ. အဖြစ်မို-sys အသင်းကို set up နှင့်ထောက်ခံမှုမေးခွန်းများကိုမှတဆင့်သူတို့ကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ဗြိတိန်ကနေအဝေးမှအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့အားလုံးထောက်ခံကြောင်းသူတို့ရဲ့ Level ဖြင့်အလွန်သဘောကျနှစ်သက်ကြသည်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "သူတို့ကဟိုမှာဘောလုံးအပေါ်တကယ်ပါပဲ။ "
ဘီဘီစီမှာ 10 မီတာမြင့်သောစတူဒီယိုအတွက်သိမ်းကျုံးရိုက်ချက်များများအတွက် Technocrane ပေါ်တွင်မို-sys StarTracker
ဘီဘီစီအဘို့, ဒီကွန်ယက်ရွေးချယ်မှုက၎င်း၏ကင်မရာခြေရာခံခြင်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ် StarTracker အလုပ်ထားပြီးစတုတ္ထတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BBC News, ဇွန်လ 8 အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရာသည်၎င်း၏အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများအတွက်သုံး StarTracker စနစ်များကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
"ဒါဟာအစဉ်မပြတ်နေတဲ့ခြေလှမ်းရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်စနစ်များကိုစောင့်ရှောက်ကြောင့်ကင်မရာရွေ့လျားမှုခြေရာခံခြင်း, ငါတို့၏ချဉ်းကပ်မှုဖွင့်," မိုက်ကယ် Geissler, CEO ဖြစ်သူမို-sys အင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ ကျနော်တို့ 'ကြယ်ပွင့်' 'အဖြစ်ရောင်ပြန်စတစ်ကာများကိုအသုံးပြုရန်ပထမဦးဆုံးခဲ့ကြခြင်းနှင့် StarTracker ကို virtual စတူဒီယိုကင်မရာခြေရာခံခြင်းအဘို့တည်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကအလင်းအပေါ် switching သကဲ့သို့လွယ်ကူဘယ်မှာမှရွေ့လျားမှုခြေရာခံခြင်းရိုးရှင်းသောင့်, ကြှနျုပျတို့ကိုဆင်းကုန်ကျစရိတ်လမ်းယူဆောင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု, ကြံ့ခိုင် system ကိုဖန်တီးပါတယ်။ "
"ကျနော်တို့ကအမြဲအသစ်အရာတစ်ခုခုကိုကိုနေ: ။ Geissler Mo-sys မှာ R & D ဒီစက်တင်ဘာလအမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2017 မှာသူတို့ရဲ့ပွဲဦးထွက်စေဟုသတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံးတီထွင်မှုများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူ, non-stop ကြောင်းသတင်းပေးပို့ ကျနော်တို့တဦးတည်းခြေလှမ်းရှေ့တခြားလူတိုင်း၏, တဦးတည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုတည်းခိုဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ပါပဲ။ "
ဘီဘီစီမှာရိုက်ကူးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, အစိမ်းမျက်နှာပြင်များအတွက်ရိန်းကဲ့သို့တူညီသောကြယ်များထံမှခြေရာခံနှစ်ဦးကိုအောက်ခံ-တပ်ဆင်ထား StarTrackers
ဂရပ်ဖစ် mo-sys NAB StarTracker က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality virtual သတ်မှတ်ပေးသည် 2017-06-29
ယခင်: လူမှုမီဒီယာအသုံးပြုသူများမှပစ်မှတ် Contextual Advertising ကြော်ငြာကိုယူခဲ့ဖို့ Comprendi နှင့်အတူ AccuWeather အပေါင်းအဖေါ်များ
နောက်တစ်ခု: Aja Desktop ကိုဆော့ဝဲ v13 နှင့် KONA IP ကို ​​JPEG, 2000 Firmware လိုင်စင်ဦးလွတ်မြောက်